बादलले गरे प्रचण्डसँग सम्बन्ध बिच्छेद- अब के होला ? « Himal Post | Online News Revolution
प्रकाशित मिति : २०७६, ७ जेष्ठ ०९:४८
काठमाडौं । एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलनले नयाँ मोड लिएको छ । पूर्वमाओवादी समूहका बरिष्ठ नेता एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) औपचारिकरुपमै प्रचण्डको साथ छाडेर ओली समूहमा समाहित भएपछि पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनले नयाँ मोड लिएको हो ।
यसै साता जनवर्गीय संगठनहरुको एकता टुंग्याएको नेकपाले आज (मंगलबार) संगठन विभाग लगायत विभिन्न विभागहरुको टुंगो लगाउन सचिवालयको बैठक बोलाएको छ ।
आज बस्ने सचिवालय बैठकमा बादललाई संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिने अध्यक्ष ओलीको तयारी छ ।
प्रचण्ड र वैद्यलाई पालैपालो धोका !
तर, रुँदैरुँदै प्रचण्डमा विलय भएँ भनेका बादलले वैद्य र प्रचण्डवीच पार्टी विभाजन हुँदा मोहन वैद्यलाई साथ दिए । वैद्य समूहमा उनी पार्टीको महासचिव एवं संगठन विभाग प्रमुख बनेका थिए । तर, नेताहरुको ठूलो टीम भइकन पनि बादलले पार्टी हाँक्न सकेनन् । तर, एकाध वर्षपछि फेरि मोहन वैद्यलाई धोका दिएर उनी प्रचण्डकै पार्टीमा फर्किए । र, माओवादी-एमालेवीच पार्टी एकता भएसँगै वादल पनि नेकपामा आइपुगे । अहिले उनी त्यसैको बलमा पूर्वमाओवादी समूहको तर्फबाट गृहमन्त्री बन्न सफल भए ।
पार्टी हाँक्ने क्षमतामा आशंका
सचिवालयमा ओली-बादललाई अप्ठ्यारो
यो सामाग्री हामीले अनलाईन खबरबाट साभार गरेका हौँ